Jagger – လရိပျသံဇဉျ
Iron Cross Live Show 2017, Singapore
Posted on May 10, 2017 May 10, 2017 by Jagger
Iron Cross Live Show 2017 Singapore Singers: Lay Phyu, Ah Nge, Wine Wine, Myo Gyi Date: 25th June, 2017 (Sunday) Time: 2:00 pm Venue: Fort Gate (Fort Canning Park), Singapore (Click here for Map – 10 mins walk from Peninsula Plaza) Ticket Price: $45 Get Your Ticket: Ye Yint Cafe, Peninsular...
Posted in EventTagged Iron Cross, Live ShowLeaveacomment
Ni Ni Khin Zaw – မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ (Unplugged Version)
Posted in VideoTagged Ni Ni Khin ZawLeaveacomment
Lay Phyu – Rosie (အသုံးမကျတဲ့နှင်းဆီ)
Posted on May 10, 2017 by Jagger
Posted in VideoTagged Iron Cross, Lay PhyuLeaveacomment
Lay Phyu – ခရီးများအဆုံးထိ
Posted on May 9, 2017 May 10, 2017 by Jagger
Posted in VideoTagged Lay PhyuLeaveacomment
Ah Nge – နူးညံ့တဲ့အမိန့်တော်
Posted in VideoTagged Ah Nge, Iron CrossLeaveacomment
Ah Nge – မျှော်လင့်ခြင်းကွင်းပြင်
Posted in VideoTagged Ah NgeLeaveacomment
Posted on May 8, 2017 May 9, 2017 by Jagger
သင်္ကြန်မိုး သီချင်းကို မြန်မာလို ဆိုပြသွားတဲ့ ကိုရီးယား မိန်းကလေးအဆိုတော် အဖွဲ့ မေလ(၆)ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ kpop Festival In Myanmar ပွဲတော်မှာ မိန်းကလေးအဆိုအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Matilda အဖွဲ့ကတော့ မြန်မာပရိသတ်များရဲ့ နှလုံးသားကို သင်္ကြန်မိုးသီချင်းနဲ့ ဖမ်းစားသွားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက နာမည်ကြီး သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ သင်္ကြန်မိုးသီချင်းကို မြန်မာလို ဆိုပြသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Matilda အဖွဲ့ဟာ သင်္ကြန်မိုး သီချင်းကို ပီပီပြင်ပြင်ကို သီဆိုပြသွားခဲ့တာပါ။ သူတို့နဲ့အတူ ပရိသတ်များကလည်း အားတက်သရော ပါဝင်သီဆိုခဲ့တာကြောင့် ဖျော်ဖြေပွဲကလည်း အရှိုန် တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ မေလ(၆)ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ Kpop Festival ပွဲကလည်း ပရိသတ်တွေ...
Posted in Celebrity, WoW!Tagged K Pop, MatildaLeaveacomment
Khin Maung Toe – Biography
Posted on February 24, 2017 February 24, 2017 by Jagger
Khin Maung Toe (Burmese: ခငျမောငျတိုး ;2April 1950 – 15 November 2012) wasaBurmese singer songwriter, and was the longtime lead singer of the Medium Wave (မဇ်ဈိမလှိုငျး) band. He was one of the few successful Burmese singer-songwriters who wrote his own original songs. He released...